နှစ်သစ်ကူးမှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်နှင့်နိုက်ကလပ်ဖျော်ဖြေရေးအတွက်အတွေ့အကြုံသစ်။ အပေါ် Hold ကြောင့်ဂုဏ်နတစ်ဦး bumpy စီးဖြစ်ပါတယ်။ (ထုတ်လုပ်) - Djs များအတွက် Nye နှစ်သစ်ကြိုဆိုပွဲ, Vjs, နိုက်ကလပ် 2019
SKU: #70 - DJ သမား6ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းသွားခဲ့သည် အမျိုးအစား: DJ သမား drop
နှစ်သစ်ကူးမှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်နှင့်နိုက်ကလပ်ဖျော်ဖြေရေးအတွက်အတွေ့အကြုံသစ်။ အပေါ် Hold ကြောင့်ဂုဏ်နတစ်ဦး bumpy စီးဖြစ်ပါတယ်။ (ထုတ်လုပ်)
သာဒီထုတ်ကုန်ပြန်လည်သုံးသပ်ထားခဲ့နိုင်တယ်ဝယ်ယူကြသူဖောက်သည်များအတွက် logged ။
တစ်ဦးကမိန်းကလေးဖမ်းပြီးသောက်ဖမ်းပြီးနှင့်သင့်နှုတ်ခမ်းပေါ်သို့ ... နှစ်သစ်ကူးနီးပါးကဒီမှာပါ! (ထုတ်လုပ်)
သင့်ရဲ့နှစ်သစ်ကူးဆုံးဖြတ်ချက်များကိုတစ်ဦးထက်ပိုသောအရက်သောက်ဖြစ်တယ်ဆိုရင် ... တစ်စုံတစ်ယောက်အော်ဟစ်! (ထုတ်လုပ်)
Quick View စျေးဝယ်ခြင်းထဲသို့ထည့်သည်
106 Pre-ထုတ်လုပ် DJ Drop
ကဘာလဲဆိုတာသူတို့ကိုအော်သံဖြစ်စေအပ်သလော အားလုံး NEW 2018 FOR! 100 Pre-ထုတ်လုပ် DJ Drop PLUS မျှတာဝန်ခံမှာခြောက်အပိုဆု!
ဤအအံ့သြဖွယ် DJ သမားနှင့်သင်၏ပြပွဲ Enhance သင်နှစ်တွင်၏ကျန်သကဲ့သို့ကောင်းစွာ Nye အပေါ်ကိုသုံးနိုင်သည်ကို drop! ဤရွေ့ကား, သင်၏ပြပွဲမှတို့သည်ကြီးစွာသောများအပြင်နောက်ထပ်နှငျ့သငျလူအစုအဝေးထဲကနေထွက်မတ်တပ်ရပ်စေမည်။ နောက်တဖန်ဤစကားသည်တစ်ဦးဆုံးရှုံးခြင်းမှာဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ အားလုံး NEW 2018 FOR! နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း djs ရာပေါင်းများစွာအားဖြင့်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ 100 Pre-ထုတ်လုပ် DJ ပေါက်အောင်တဲ့သမိုင်းနှင့်အတူဤနယူးနှစ်ဧဝကို EPIC လုပ်ပါ။ စာရင်း TRACK (အောက်တွင်နားထောငျကွ)
ထွက်လာမယ့်နှင့်ငါတို့နှင့်အတူနှစ်သစ်ကူးဧဝကိုကျင်းပနေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျနော်တို့အဖြူရောင်ရဲတိုက်မှာသင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ယခုပိတ်လိုက်ပါတယ်! အဘယ်သူမျှမကတော့ fuck ဆိုတဲ့အထဲကရ! (ထုတ်လုပ်)
ဝိုး။ သင်အမှန်တကယ်တစ်လူထုံနေပါပြီ! (ထုတ်လုပ်)
Ladies နှင့်လူကြီးလူကောင်း, သင်သည်အမှုရောက်သောသို့ရတဲ့မရှိဘဲလာမယ့် 30 စက္ကန့်များအတွက်မည်သူမဆိုရဲ့မြည်းကိုဖမ်းပြီးလိမ့်မည်။ (ထုတ်လုပ်)
အားလုံးကြီးတွေမိန်းကလေးငယ်အချို့ဆူညံသံစေ! (ဝက်အသံ) (ထုတ်လုပ်)
Ladies နှင့်လူကြီးလူကောင်း။ ကိုမျက်နှာသာမသူအဆောက်အဦးရွက်အဖြစ် asshole မှနှုတ်ဆက်ချီလွှဲ! (ထုတ်လုပ်)
ထွက်လာမယ့်နှင့်ငါတို့နှင့်အတူနှစ်သစ်ကူးဧဝကိုကျင်းပနေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျနော်တို့ Waffle အိမ်မှာသင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ယခုပိတ်လိုက်ပါတယ်! (ထုတ်လုပ်)
Ladies နှင့်လူကြီးလူကောင်း, အရက်များအတွက်နောက်ဆုံးခေါ်ဆိုခ! (ထုတ်လုပ်)
ဒါဟာပါတီ FCC သည်အတည်ပြုထားသည်။ Ummmm အဆိုပါ FCC သည်ဝက်အူ! ရဲ့ပါတီ n တစ်ဦးကိုမှန်ကန် @ # @ '' ရှိပါစေ! (ထုတ်လုပ်)